Hetsika RSE Mifanakalo hevitra ny orinasa sy ny fiarahamonina
Niditra tamin’ny andiany fahefatra tetsy amin’ny Garan’i Soarano omaly ary hifarana anio ny hetsika RSE na « Résponsabilité societale et entreprise ».
Araka izay moa dia tanjona ao anatin’ny hetsika ny hahafahan’ireo orinasa misafidy ny handray anjara amin’izany ny hametraka tamberin’andraikitra eo amin’ny fiarahamonina amin’ny alalan’ireo vokatry ny orinasany avy. Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ireo minisitera voakasika ho famerenana ny tany tan-dalàna eo amin’ny sehatry ny fandraharahana moa ity tanjona ity, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana. Anisan’ny hapetraka ny antsoina hoe « label verte » ho an’ireo orinasa manaja ny tontolo iainana sy mahaolona. Natao hifanakalozana eo amin’ny orinasa sy ny mpiara-miombon’antoka aminy rehetra ny « Salon RSE » saingy amin’ny maha zava-baovao azy eto Madagasikara raha mitaha amin’ny an’ny firenen-kafa dia mbola olana ny tsy fahafantarana, hoy ny mpikarakara.